Maxay yihiin siyaabaha loo dhisi karo dib u dhiska?
Dhismaha xidhiidhka waa midka koowaad iyo kan ugu dhibka badan ee raadinta moobiilka. Waxay saameeysaa jagada mareegta ee shabakadda waxayna abuurtaa aragtida Google ee ku saabsan aag gaar ah. Doorka xiriirka soo socda ee SEO ayaa lagu muujiyay tirada saamiyadaha isxiga ee daraasadda.
Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah websaydhadu wali waxay ka shaki qabaan saameynta iyo faa'iidooyinka xiriirrada ku jira. Waxay ku andacoodaan in Google ee ku tiirsanaanta dhabarka ay hoos u dhacayso. Si kastaba ha ahaatee, waxaan jeclaan lahaa inaan halkaa ka soo qaado. Backlinks ma dhumin karo mar alla markii ugu dhakhsaha badan marka ay door muhiim ah ka qaataan darajada Google ee algorithm. Daraasadihii dhowaa waxay muujinayaan in tirada domains ay isku xiran yihiin bog oo isbarbar dhiga kala duwanaansho ka badan waxkasta oo kale. Haddii aadan macluumaadkaan si dhab ah u qaadan, isku day inaad naftaada baarisato. Ku dar qodobka muhiimka ah ee laguu xushay Analyzer Web Site iyo fiiri boggaga sare. Dhammaantood waxay leeyihiin xiriiro badan oo soo socda. Xitaa haddii ereygaaga muhiimka ah ee aad ujecel tahay uusan aheyn tartan aad u tiro badan, bogagga shabakada ee TOP wuxuu lahaan doonaa xiriiro badan oo soo socda.
Qodobkani, waxaan ka wada hadli doonaa sidii dib loogu dhisi lahaa gadaal dhaqso ah oo waxtar leh. Waxaanu isticmaalnay qaar ka mid ah istaraatiijiyadaha isku xirnaanta xiriirka si kor loogu qaado liiska macaamiisheena. Waxaan helnay natiijooyin wax ku ool ah waxayna kor u qaadeen sheekooyinka macaamiisheena.
Sidaas, aynu sii socono! Rajeynta macluumaadkaan waxay kuu haysan doontaa si aad u hesho juice tayo sare leh ee goobtaada. Istaraatijiyad la isku haleyn karo si loo dhiso dib u qaabeyn degdeg ah
Abuuri wadiiqooyinka xiriirka leh mashiinnada raadinta gaarka ah
Sida xukunka, boggaga internetka ee kuugu xirnayd horay u sii suurogal badan in mar kale ay sidaas sameeyaan. Waxay sameeyaan sababtoo ah waxay mar horeba taageerayaan waxa aad sameyneyso iyo qorista. Waxay u badan tahay inay xiiso u yeelan doonaan wax cusub oo aad daabacan oo isku xirayso. Sawirka aad haysatid xogta macluumaadka dhammaan ilaha websaydhka ee horeyba uugu xirnaa, iyo, marka, waxay u badan tahay inay xiiseeyaan content cusub. Waa shaki la'aan waxay noqon doontaa waalid awood u leh ganacsigaaga internetka sida aad u heli karto socod joogto ah ee gaadiidka soo galaya goobtaada.
Waxaad dhisi kartaa xogtaas oo kale adigoo isticmaalaya CSE Google. Wax kasta oo aad u baahan tahay waa inaad raacdaa talaabooyinkan:
Ogow ilaha webka ee horeba kugu xidhaya;
Ku dhaji ilaha ilaha mashiinka khaaska ah;
Raadi fikradaha isku xirka ee mustaqbalka.
Saxiixa aaladda Google ee CSE oo abuuro makiinad raadin cusub oo cusub. Kadib waxaad gashaa website-ka aad rabto inaad raadiso iyo magaca mashiinka raadinta khaaska ah ee cusub. Ku dhaji tabka ku xiga iyo arko qiimaha unugyada A1. Waa in loo qaabeeyaa "domain. tag. "Waxaad ubaahan tahay inaad nuqul ka sameyso xogtan" qaybaha raadinta "qaybtaada mashiinkaaga search engine. Ugu dambeyn, guji "badhanka" badhan.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad jeclaan lahayd inaad ka raadiso domains badan oo ka muuqda boggaaga dambe, waxaad u baahan tahay inaad ku darto xayndaab kale oo aad leedahay. Taasi waa sababta aad u baahan tahay inaad gujiso "badalida mashiinka raadinta" oo ku dar goobo badan. Waxaad dooran kartaa ikhtiyaarkaaga "inaad ku darto goobo badan" oo aad ku qorto liiska domains sanduuqa. Dooro shaqo "ku dar dhammaan bogagga boggaan" oo guji "keydso. "
Hadda, mashiinka raadinta caadadaadu waa diyaar. Waxaad u isticmaali kartaa si aad u raadiso fursadaha dhismaha xiriir kasta waqti kasta oo aad daabacato shey cusub oo cusub.
Xidhiidhka xiriirinta isku xirnaanshaha wuxuu noqon karaa mid wax ku ool ah haddii profile-kaaga koraayo sababtoo ah waxaad haysataa xog badan oo ballaaran oo ilaha webka ah si aad u raadiso Source .